“Wax badan ayaan ku guuleysan doonaa” – Klopp oo farxad galiyay taageerayaasha Liverpool – Gool FM
“Wax badan ayaan ku guuleysan doonaa” – Klopp oo farxad galiyay taageerayaasha Liverpool
(England) 07 Luulyo 2019.Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa sheegay in ku guuleysigoodii tartanka UEFA Champions League ee xili ciyaareedkii tagay ay u noqon doonto dhiiragalin xoogan, si ay ugu guuleystaan tartamo badan mustaqbalka dhow.
Hadaba Jürgen Klopp ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada rasmiga ah ee kooxda Liverpool wuxuu ku sheegay:
“Dabcan waan sii wadi doonaa, haa, waxaan gaarnay guul aan marna la iloobi karin, laakiin maalin kasta ma soo toosi doono si aan u dhahno subax wanaagsan waxaan ku guuleysanay Champions League!”.
“Guushaan waa in ciyaartoy badan ay sii saa kalsooni dheeraad ah, taasi ayaana ah waxa ugu muhiimsan, laakiin si la mid ah kalsoonida oo kaliya ma noqon doonto wax nagu filan, Inaan ku guuleysano Champions League macnaheedu ma ahan inaan ku qanacsanahay waxa aan ku guuleysanay, wali waxaan haysanaa wax badan oo aan rajeyneyno inaan gaarno”.
“Waxaan leenahay waaya-aragnimo aan la ilaabi karin. Waxaan ciyaarnay kulan final ah waana ku guuleysanay, kaddib waxaan ku laabanay Liverpool, waxaana koobka kula dabaaldegnay taageerayaasheena cajiibka ah, tani waa waxaan jeclaan lahayn inaan ku celino marar badan”.
“Waa wax aan caadi ahayn, mana laga tirtiri doono xusuusteena, mustaqbalka, qofna ma sheegi karto in aadan waxba ku guuleysanin, laakiin waa inaan ka faa’ideysanaa guushan si aan u dhisno xilli ciyaareedka cusub, xaalada haatan si wanaagsan ayeey u socotaa”.
Xulka qaranka Gabdhaha USA oo ku guuleystay Koobka Adduunka Dumarka 2019, kaddib markii ay kaga adkaadeen dhiggooda Netherlands... + SAWIRRO